Porn သည်ဆက်ဆံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သော်လည်းသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ အမန်ဒါ Pasciucco LMFT, CST; Wendy Haggerty LMFT, CST (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မှတ်စုများ: Porn တစ်ဦးကဆက်ဆံရေးကိုကူညီပါကားသတိပြုရန်နှင့်အတူရှေ့ဆက်မည်နိုင်သလား
Teresa အမ် PELHAM
porn နှင့်အတူမူလတန်းပြဿနာကလက်တွေ့မမျှော်လင့်ချက်များဖန်တီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ, နှင့်အခြားသောအမှုအရာ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လမ်းပေါ်ရှိအဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်မှ Playboy မိတ္တူတစ်ခုရရန်ရည်ရွယ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုများသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများရှိသည့်လူများအကြောင်းကိုသိပ်မကြားခဲ့ပါ။
(ကယခုအချိန်တွင်များအတွက်စိတ်ကူးကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ Laptop ပေါ်မှာရှာဖွေရေးသမိုင်းငါသည်ဤကော်လံရေးသားခြင်းပြီးစီးသည့်အချိန်အားဖြင့်တူသွားဘာ။ ဟုတ်ကဲ့, ဒီကိုပယ်ရှား။ ကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည်သလားကြံစည်မှုလိုင်းများတော်တော်လေးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း, ဇာတ်ကောင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတခဲ့ကြ အလိုရှိသောခံရဖို့အများကြီးကျန်ရစ်။ )
သို့သော်ယနေ့တွင်၊ သင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) စမတ်ဖုန်းတွင်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသောဗွီဒီယိုကလစ်များပေါ်နိုင်သည်။ အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီမှုတစ်ခုတည်းကဤပြproblemsနာအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်းကျွမ်းကျင်သူများက၎င်းသည်အိပ်ခန်းအတွင်းပြtroubleနာဖြစ်စေနိုင်သောထိပ်တန်းလိင်မြင်ကွင်းများဖြစ်သည်။
လိင်ကုသကြည့်ရှုသူတို့ကိုယ်သူတို့နွမ်း, အလွန်အမင်းကျေနပ်အမျိုးသမီးတည်ငြိမ်တဲ့အစားအစာကိုခွင့်ပြုသည့်အခါသူတို့ non-ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဝတ်အချည်းစည်းလူတစ်ဦးနှင့်အဆက်အသွယ်ရသောအခါစိတ်ပျက်ဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုသတင်းပို့ပါ။
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်တဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့လက်တွေ့ဘ ၀ မှာလူတွေနဲ့နှိုးဆွမှုမရှိတာတို့အကြားဆက်စပ်မှုရှိတယ်” ဟုအနောက် Hartford မှအသိအမှတ်ပြုလိင်ကုထုံးသမားအမန်ဒါပါစီကူကဆိုသည်။ “ သူတို့ဟာစိတ်ပျက်အားလျော့သွားပြီးသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကမယှဉ်နိုင်ဘူး။ သူတို့မြင်တဲ့အလောင်းတွေကလက်တွေ့မကျဘူး။ ”
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပြီးနောက်ပြန်ဆံပင်နဲ့ဆွဲကြိုးအစိတ်အပိုင်းတွေရှိတဲ့လူလတ်ပိုင်းလူနှစ် ဦး ကြားမှာပုံမှန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့မတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီမြင်တွေ့လိုက်ရသည့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်ရှေ့တွင်ရှိသောပြtroubleနာများကိုစိတ်ကူးရန်လွယ်ကူသည်။
“ သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းအချို့ကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးကိုယူဆောင်လာရန်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုပြောဆိုပါ။ “ သင်နှင့်အတူရှိနေသောသူနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စိတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပါ။ ”
သင့်ရဲ့စိတ်ကို? ငါကအခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအွမ်, ငါတို့အကြောင်းပြောနေတာခဲ့ကြသည်ထင်ခဲ့တယ်။
သို့သော်လေ့လာမှုများအရ ဦး နှောက်သည်ရုပ်ငြိမ်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းအားတုံ့ပြန်မှုတွင်ကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ Pasciucco သည်“ ဦး နှောက်၏စိတ်ကူးယဉ်အစိတ်အပိုင်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်” ရက် ၉၀ ကြာအစာရှောင်ခြင်းကိုအကြံပြုသည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းကြောင့်သုတေသနအသစ်များအရလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန် ၁၂ နှစ်အရွယ်သာဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ (ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ကလေးတွေမဟုတ်ဘူး။
Wendy Haggerty, Glastonbury, Guilford နှင့်အနောက် Hartford အတွက်ရုံးများနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုလိင်ကုထုံး, လူငယ်များအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အမှန်တကယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါသည်ဟုဆိုသည်။
“ အလွန်အကျွံသုံးတာကလူမှုဆက်ဆံရေးကိုအထီးကျန်စေပြီးအပြုအမူပုံစံများကို ဦး တည်ခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး ၏ကျန်းမာသန်စွမ်းသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ခြင်းကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ “ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုနှင့်လိင်၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံရိပ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများသည်လည်းအလားအလာရှိသောအကျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ ”
သို့သော် porn သည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးများအရဆိုးသည်မဟုတ်ဟု Haggerty ကပြောကြားခဲ့သည်။
တစ် ဦး ချင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအကျိုးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရသည့်စံနမူနာကောင်းများစွာကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားနိုင်သည်။ အချို့လူများကဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်မသင်မနေရများလည်းကျွန်ုပ်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်” ဟု Haggerty ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဟန်ချက်ညီစွာဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ လိင်စိတ်နှိုးဆွသောပစ္စည်းများကိုကျန်းမာစွာအသုံးပြုခြင်းသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်သည့်အကျင့်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းများတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ”
The Boyfriend နှင့်ငါသည်သူမ၏သီအိုရီကိုစမ်းသပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး Showtime တွင်ပျော့ပျောင်းသောအဓိကရုပ်ပုံအချို့ကိုကြည့်ခဲ့သည်။ ကြည့်လို့မရတဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်နဲ့မယိုယွင်းနိုင်တဲ့ရင်သားတွေအပြင်ကြည့်ရှုသူတွေကသီးသန့်အစိတ်အပိုင်းတွေမပြသဘဲသရုပ်ဆောင်တွေကတကယ်တော့လိင်နဲ့မဆက်ဆံကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ bow-chicka-wow-wow ဂီတကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေပြီး porn ရုပ်ရှင်ကားတွေအတွက်ဂီတဖန်တီးသူတွေကနံပါတ်တစ်ထိခိုက်မှုရှိလားဆိုတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်။
"စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြသူသည်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု၏အကူအညီဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုသည်သူသို့မဟုတ်သူမ၏လိုအပ်ချက်များကိုထိရောက်စွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးအနိမ့်အလိုဆန္ဒပါတနာအားပါ ၀ င်ရန်ဖိအားပေးသည်" ဟု Haggerty ကဆိုသည်။ "ထို့အပြင်အနိမ့်အလိုဆန္ဒမိတ်ဖက်သူသို့မဟုတ်သူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်မိတ်ဖက်ရငျးနှီးမှုအတွက်ပိုမိုရရှိနိုင်ပါရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ "
ဒါကြောင့်, ဘေးဖယ်သည့် misogynistic porn များ၏အများစု၏သဘောသဘာနှင့်စွဲလမ်း၏ကိစ္စများနှင့်ဆက်ဆံရေးမှလုပျနိုငျမကောင်းတဲ့အမှုအရာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လဆန်းအပေါ်ပိုက်ဆံအများကြီးဖြုန်းလူများတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုမျိုးဆက်ဖန်တီးထားပြီးလမ်းမှ, ညစ်ညမ်းနိုင်ဖြစ်နိုင်သည် တစ်ဦး (မဖြောင့်ကိုအလွယ်တကူမကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်အာရုံသူတို့အားအဘို့နှင့်သာမန်ဂီတ) ဆက်ဆံရေးမျိုးတစ်ဦးအပြုသဘောများအပြင်ရှိစေသတည်း။
Teresa M. Pelham သည် Roxy's Forever Home စာအုပ်ကလေးများစာအုပ်ကိုရေးသားသူဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိရန် - www.roxysforeverhome.com.